रत्नपार्कमा बसेर ह्वार–ह्वार बाँडेझैं पदक वितरण गरियो : ओली | Online Nepal
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसको दिन वितरण गरिएको पदकबारे चर्को आलोचना गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा मदन भण्डारीको जीवनीमा आधारित रमेश रुछेन राईद्वारा लिखित ‘श्वेतशार्दूल’ नामको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले वर्तमान सरकारले रत्नपार्कमा बसेर ह्वार–ह्वार बाँडेझैं पदक बाँडेको आरोप लगाए।
‘अस्तिको दिन बितरण गरेको जस्तो पदकहरु हामीले बितरण गरेको भए….बा बा । अहिले त खारेज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, अब कसले खारेज गर्ने ? बहस गर्ने वकिललाई पनि पदक दिएको छ, अब कसले बहस गर्ने ? विरोध गर्ने मिडियालाई पनि दिएको छ, कसले विरोध गरिदिने ? कसले बोल्ने ?,’ ओलीले भने.
ओलीले सरकारले रत्नपार्कमा बसेर वितरण गरेको जस्तै गरेर ह्वार–ह्वार पदक वितरण गरेको बताए । ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गरेको भए ओहो । के हुन्थ्यो ? बुद्धिजिवी, नागरिक के भन्थ्यो ? आज रमाइलो छ, सब चुपचाप छन्, शान्त छ,’ ओलीले भने ।
यस्तै, कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार बनेपछि देशमा दिउँसै ग्रहण लागेको बताए । ‘दिउँसै ग्रहण लाग्यो भने ग्रहणतिर नहेर्नु भन्छन् । अहिले ग्रहण लागेको छ । ग्रहणतिर नहेर्नु, धेरै काम छैन । अशुभ छ,’ उनले भने।
पाँच दलीय गठबन्धन प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी भएको ओलीको आरोप
गिनिज बुकमा नाम लेखाउने ओलीको रहरले तीन वर्ष खेर गयो: गगन थापा
ओलीले हावादारी गफ र उखान टुक्कामार्फत् गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछन्: बाबुराम भट्टराई
एमालेले चाहे एक हप्ताभित्रै सरकार ढाल्न सक्छ : ओली
६,७४३ वडामा एकैदिन अधिवेशन गर्दै एमाले, कात्तिक ६ लाई तोकियो मिति
ओलीले गरे देउवा सरकारको कडा आलोचना, ‘अर्ली इलेक्सन’को सम्भावना रहेको दावी
केपी ओली र प्रचण्डलाई पुन: मिलेर अघि बढ्न चिनियाँ राजदूतको सुझाव
ओलीले यस वर्ष दशैंको टीका नलगाउने